GENOA VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay fiidkii kusoo geli karaan! – Gool FM
GENOA VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay fiidkii kusoo geli karaan!
(Genoa) 11 Maarso 2018 – Waxaa caawa fiidkii inay jidkii guulaha kusoo noqoto isku deyi doonta kooxda AC Milan oo ay Khamiistii 2-0 ku khaarajisey kooxda Gunners, waxayse gurigeeda ugu martiyaysaa Genoa oo ah koox yar oo reera dhib ah.
Dhanka Genoa: Giuseppe Rossi ayaa soo noqonaya, balse waxaan weli 100% ahayn xaaladda jireed ee Taarabt, halka ay maqan yihiin Veloso iyo Izzo.
Dhanka Milan: Wuxuu macallinka Milan ee Rino Gattuso doonayaa inuu safka 1-aad kusoo kordhiyo Borini oo difaacaya booskii Calabria oo dhowr jugood kasoo gaartey kulankii Arsenal. Calhanoglu ayaa ka weerartamaya garabka bidix. Weerarka dhexe waa Kalinic oo u muuqda nin heli doona fursaddii ugu dambaysay, isagoon wax gool ah dhalinin tan iyo 3-dii Diseembar.
23 LAMANNA, 38 ZIMA, 13 ROSSETTINI, 32 PEREIRA, 18 MIGLIORE, 40 OMEONGA, 22 LAZOVIC, 24 BESSA, 10 LAPADULA, 17 EL YAMIQ, 49 G. ROSSI, 45 MEDEIROS
90 A. DONNARUMMA, 30 STORARI, 2 CALABRIA, 22 MUSACCHIO, 15 G. GOMEZ, 31 ANTONELLI, 17 ZAPATA, 73 LOCATELLI, 18 MONTOLIVO, 4 MAURI, 9 ANDRÉ SILVA, 63 CUTRONE
Veloso, Izzo, Taarabt
JUVENTUS VS UDINESE: Shaxda & safafka ay galabta kusoo geli karaan!
INTER MILAN VS SSC NAPOLI: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!